/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: ြမန်မာစာဖျက်မယ့်လူ ကျွန်ေတာ်တို့(User)ေတွ မဟုတ်ြကပါဘူး
ြမန်မာစာဖျက်မယ့်လူ ကျွန်ေတာ်တို့(User)ေတွ မဟုတ်ြကပါဘူး
ပျူ : ကိုလင်းဦး ယူနီကုတ်နဲ့ ဘေလာ့ ေရးတာေနာ်
linoo2007 : ဟုတ်တယ် ဧရာယူနီကုတ်
ပျူ: အဲဒါ ြမန်မာ3နဲ့ ဘာကွာလဲ အတူတူပဲလား
linoo2007 : တူဘူး ြမန်မာ ၃ မှာက
ပျူ : ဟုတ်
linoo2007 : ေက (ေက)
ဟိုေကာင် ၃ က ေြပာင်းြပန်ေတွနဲ့
Lionslayer ## ဧရာက ယူနီကုတ် အက္ခရာေတွကို သံုးထားတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ယူနီကုတ် စာလံုးစီပံုကို မလိုက်နာထားပါ။ ဒါေြကာင့် ဧရာဟာ ယူနီကုတ် မဟုတ်ပါ။
ယူနီကုဒ် စာလံုးစီပံုမတူတာနဲ့ မစစ်ဘူးေြပာတာက၊ ငါ့ြမင်းငါ့စိုင်း စစ်ကိုင်းေရာက်ေရာက်၊ ေနြပည်ေတာ်ေရာက်ေရာက်ေြပာတဲ့ စကားပါ။ Ecoding ကို စာလံုးစီတဲ့လို့ ေြပာထဲက သေဘာေပါက်လိုက်ပါတယ်။ encoding ဆိုတာဘာလဲ သိချင်ရင် ကိုထူးြမင့်ေနာင်ရဲ့ http://myanmarunicode.org/unicode/meaning-of-encoding-and-what-is-encoding/ ကိုဖတ်ြကည့်ပါ။ သေဘာေပါက်သွားမယ်။ လိုရာဆွဲယူ၊ လိုရာဆွဲေြပာ၊ ကိုယ်ပစ္စည်းအတွက် ကိုယ်ေြကာ်ြငာဝင်တာ မဆန်းပါဘူး။
linoo2007 : လက်ရှိ အစိုးရကသာ စံမီတယ်ဆိုြပီး အတင်းသံုးခိုင်းေနြကတာ
Lionslayer ## ယူနီကုဒ်က အစိုးရနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါ။ ISO နဲ့ Unicode Consortium ကိုယ်တိုင်ကိုက ဘယ်အစိုးရကမှ ချုပ်ကိုင်ထားြခ်ငးမရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းေတွ ြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ယူနီကုဒ်အတွက် ဝိုင်းဝန်းလုပ်ေပးေနသူေတွဟာလည်း ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားြပီး တစ်ြပားမှမရဘဲ ြမန်မာစာတိုးတက်ေရးအတွက် ေရှးရှုြပီး အားလံုး ဝိုင်းဝန်း ကူညီေပးေနြကတာ ြဖစ်ပါတယ်။
ယူနီကုဒ်က အစိုးရနဲ့ မဆိုင်ေပမယ့် ြမန်မာ ၃ ဆိုတာ နိုင်ငံေတာ်အဆင့် ပေရာဂျက်ပါ။
Lionslayer : ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားြပီး တစ်ြပားမှမရဘဲ ြမန်မာစာတိုးတက်ေရးအတွက် ေရှးရှုြပီး အားလံုး ဝိုင်းဝန်း ကူညီေပးေနြကတာ ြဖစ်ပါတယ်။
အဲ့အတွက် ေလးစားပါတယ်။ တကယ်ေစတနာထားြပီး လုပ်ေနတယ်ဆိုေပါ့။ အကျိုးလိုလို့ ေညာင်ေရေလာင်းတာ မဟုတ်ရင်ေပါ့။
linoo2007: ြမန်မာယူနီကုဒ်-၃ (Myanmar Unicode 3) ေဖာင့်ကို
ြမန်မာစာအေရးအသား မှန်ကန်တယ်လို့ ေြပာေနြကတာေတွ့ရပါတယ်။
ဘယ်လိုေရးလို့ ြမန်မာစာ အေရးအသားမှန်ေနတာလဲ။ လွဲေနတာေတွ
ရှိေန ြမင်ေန ရတာပဲ။ ဥပမာ။ (ေက) ရိုက်မယ်ဆိုပါစို့ ၊ (က) ြပီးေမှ ()
ရိုက်ေနရတာဟာ ြမန်မာစာ အေရးအသားရ မှန်ပါသလား ။ (ေရွှညွန့်)ကို
ေရးမယ် ဆိုပါစို့။ ေရ + + ဝ +ှ + ည + ဝ+ှ+ န+့ +် လို့ ရိုက်
ေနရပါတယ်။ ဟိုးကတည်းက ြမန်မာစာကို ဗျည်းေတွ သရေတွနဲ့
တွဲြပီး သင်ခဲ့ရသူေတွဟာ ကွန်ပျူတာရိုက်ကာမှ ေြပာင်းြပန် ြပန်ရိုက်
Lionslayer : ##ယူနီကုဒ်မှာ ဘယ်ဘာသာစကားအတွက်မဆို လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းေတွ ရှိပါတယ်။ ဗျည်းအရင်လာ၊ ဗျည်းေနာက်က ဗျည်းတွဲ၊ ဗျည်းတွဲြပီးမှ သရလာ စတဲ့ မလွဲမေသွ လိုက်နာရတဲ့ စည်းမျဉ်းေတွပါ။ ဘာသာေဗဒ နဲ့ ယုတ္တိေဗဒ သေဘာတရားအရ စီစဉ်ထားတာြဖစ်ပါတယ်။ ရိုက်တဲ့အခါမှာသာ သင်ပုန်းြကီးအတိုင်း ရိုက်လို့ရေအာင် စီစဉ်ေပးထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။
ယူနီကုဒ့် သံုးမှ ြမန်မာစာက Standard ြဖစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ြမန်မာစာမှာ ြမန်မာစာရဲ့ အရည်အေသွး၊ သတ်မှတ်ချက် စတဲ့ စံေတွ ရှိတဲ့ ြမန်မာစာပါ။ ကွန်ပျူတာသံုးဖို့ ြမန်မာစာစံေတွကို ေဖာက်ဖျတ်ြပီးလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ေတာ့ သဘာဝမကျဘူးထင်ပါတယ်။
တီထွင်သူများမှ နည်းပညာအရ ဒီေနရာ ဒီလိုေလးရိုက်မှ အဆင်ေြပ
မှပါလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဆို နည်းပညာအရ ြမန်မာစာအေရးအသားမှာ
ေြပာင်းြပန်ြဖစ်သင့်တာ ြဖစ်ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာလား။ ေဇာ်ဂျီ
လက်ကွက်အတိုင်း (ေက)ကို (ေက)လို့ ရိုက်နိုင်သည်ဟု ဆိုြပန်သည်။
(ေက)လို့ ရိုက်ြပီး စက်က(ေက) ဟု သိမ်းရန် ြပုလုပ်ြခင်းြဖစ်သည့်
အတွက် စာရိုက်ရာတွင် ပံုမှန်ထက် စာလံုးေပါ်ရန် အချိန်ြကာသည်။
စာမျက်နှာ (၃၀၀) ရိုက်မည်ဆိုပါစို့။ ရိုက်ရမည့် စာတိုင်းတွင်
reordering အထက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း လိုက်ေြပာင်းေပးေနရသည့်
အတွက် စက်သည် ပိုမိုေလးလံြခင်း၊ ဖွင့်မရြခင်းများ ြဖစ်လာပါမည်။
ထို့ေြကာင့် ပံုမှန်စက်များ၊ အြပင် စာစီစာရိုက်ဆိုင်များအတွက်လည်း
ေဘးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် ရင်ဆိုင်ရပါမည်။ မန်မိုရီများစွာ ကုန်ပါတယ်။
မန်မိုရီများလာလျှင် CPU များ ပူလာပါမည်။ ထို့ြပင် ဒီဇိုင်းနှင့် ဖိုတိုေရှာ့
များတွင် အသံုးြပု၍ မရပါ။ ယေန့ေခတ် ေဆာ့ဝဲများ၊ OS ေရးသူများ
သည် မန်မိုရီ နည်းသမျှ နည်းေအာင် ြပုလာြကချိန်တွင်
Myanmar Unicode အား အသံုးြပုလာမည်ဆိုြခင်းမှာ စဉ်းစားစရာပင်
Lionslayer : ##စာမျက်နှာ ၃၀၀ မေြပာပါနဲ့။ စာမျက်နှာေပါင်း သံုးေသာင်းခွဲအထက်ရှိတဲ့ ပေရာဂျက်ေတွကို ကျွန်ေတာ် ယူနီကုဒ်နဲ့ လုပ်ေနတာပါ။ ေနာက်တစ်ခု မန်မိုရီများစွာကုန်တယ်ဆိုလည်း မဟုတ်ပါ။ စာလံုးေရ အတူတူရှိတဲ့ Shaping Engine သံုးထားတဲ့ Text နဲ့ မသံုးထားတဲ့ Text နဲ့ကို ြပိုင််တူဖွင့်ြကည့်ြပီး ယှဉ်ြကည့်ပါ။ ေနာက်တစ်ခု မန်မိုရီများလာနဲ့ စီပီယူပူလာတာနဲ့ (ဘာဆိုဘာမှ) မဆိုင်ပါ။ သံလွင်ေဖာင့်ဟာ Adode ရဲ့ ေနာက်ဆံုးထွက် ဗားရှင်းအကုန်မှာ သံုးလို့ရပါတယ်။
“မန်မိုရီများစွာကုန်တယ်ဆိုလည်း မဟုတ်ပါ” ဆိုတာက ရီစရာပါ။ ယူနီကုဒ်သံုးဖို့ ဟိုဟာမှာမှ ဒီဟာနဲ့ သံုးရမယ်ဆိုရင် ဒီေန့ေခတ်ြကီးမှာ ယူနီကုဒ်သံုးလို့ဘာမှ ြဖစ်လာစရာမရှိပါဘူး။
ပထမအဆင့်။ စာေရးသူက (ေက) လို့ စာလံုးတလံုးရိုက်တယ်။ လက်ကွက်ပရိုဂရမ်က (ကေ) လို့ ေြပာင်းေပးတယ်။ ရိုက်ေနရင်း အဲလိုေတွ့တိုင်း ေြပာင်းဖို့လုပ်ေနရတာကေရာ။ ရိုက်ေနရင် စာလံုးေပါ်မလာေသးတာေတွကေရာ မန်မိုရီသံုးေနလို့ မဟုတ်ဘူးလား။ အဲ့တာက မန်မိုရီမကုန်ဘူးလား။
ဒုတိယအဆင့် ။ ကိုယ်ေရးလိုက်တဲ့စာေတွကို ေဖာင့်ကေလ (ကေ)ကေန (ေက) ြဖစ်ေအာင် ပံုေဖါ်ေပးတဲ့ rendering က (ကေ) ေတွ့တိုင်း ေြပာင်းေနရတာေရာ မန်မိုရီမကုန်ဘူးလား။ စာေြကာင်းတိုင်းကို အဲလိုပံုေဖါ်ေနရရင် စာလံုးေပါင်းသိန်းနဲ့ချီလာရင် ဘယ်လိုလုပ်မတုန်း...
ယူနီကုဒ်မည်သည် မည်သည့် ယူနီကုဒ်ကမဆို အြခားယူနီကုဒ်ေဖာင့်
တစ်ခုအား လွယ်ကူစွာေြပာင်းလဲနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်း
တစ်ခုထဲက ထုတ်တဲ့ Myanmar-2 နဲ့ Myanmar3ေဖာင့်နှစ်ခုက
အြပန်အလှန် ေြပာင်းလို့ ရပါသလား။ ဖတ်လို့ ရပါသလား။ (Converter
နဲ့ ေြပာင်းတာကိုမဆိုလိုပါ၊ Select ေပးြပီး ချက်ြခင်းေြပာင်း လဲြခင်းကို
ဆိုလိုသည်) ။ ေြပာင်း၍ မရပါ။ ြကိုးစားမှုကို ေလးစားပါတယ်။ သို့ေသာ်
ယခုလို အခက်အခဲများ ရှိေနေသာ ြမန်မာယူနီကုဒ်အား အသံုးြပုရန်
အသံုးြပုသူများအေနြဖင့် အခက်အခဲများစွာ ရှိေနပါတယ်။
Lionslayer :##ရပါတယ်။ ြမန်မာ၂ နဲ့ ြမန်မာသံုး ကွာတာဟာ - ြမန်မာ၃ မှာ စာလံုးစီပံုမှားရင် ချက်ချင်းြမင်ရေအာင် Dotted Circle နဲ့ ြပြပီး ြမန်မာ၂ မှာ မြပပါ။
ေဈးဆိုတာကို ဈ နဲ့ မေရားဘဲ စ+ျ ေရးရင် ဘာလို့ မြပတာလဲေနာ်...
၁၃။ Alt+1 - တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ေဝးြခင်း
၁၄။ ေခါင်းေလာင်းေလး - ဝါေနလား၊ မဝါဘူးလားကို လှမ်းြကည့်ြကည့်
Lionslayer ##အဲဒါ NHM ကီးဘုတ် တစ်ခုကို ြကည့်ြပီးေြပာေနတာသာ ြဖစ်ပါတယ်။ Control+Shift နဲ့မှ ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် ြမန်မာ၂ လက်ကွက်နဲ့ ရိုက်လို့ ရတဲ့ အက္ခရာ ကီးဘုတ် ရှိပါတယ်။
၁၅။ Font Style - အလွန်များြပားေနြပီး တစ်ခုချင်းစီကို install လိုက်
Lionslayer ####လိုမှ လုပ်ပါ။ မလိုလည်း တစ်ခုတည်း ရှိလည်း အားလံုးကို အမှန် ြမင်ရပါတယ်။ အဂင်္လိပ်စာမှာလည်း အဂင်္လိပ်ယူနီကုတ်ေတွ ြဖစ်တဲ့ Arial, Time News Roman, Verdana, Tahoma စတဲ့ ေဖာင့်အစံု သံုးေနတာပဲ မဟုတ်ပါလား။
၁၆။ Fonts - တစ်ေနရာတည်းတွင် စုစည်း၍ ရှိမေနြခင်း
Lionslayer ####MyanmarLanguage.org မှာ ရသမျှ အချက်အလက်ေတွအကုန် စုစည်းဖို့ ြကိုးစားေနပါတယ်။ ယူနီကုတ်ေဖာင့်ေတွပါတဲ့ Package တစ်ခုလည်း စုစည်းေပးထားြပီး ြဖစ်ပါတယ်။
၁၇။ စာရိုက်ဟန် - ဗျည်းကိစ္စ၊ သရကိစ္စကို ထည့်ေြပာေနရြခင်း
Lionslayer ####atn လို့ ရိုက်ြပီး ant လို့ ထွက်ချင်ရင် ဒါေတာ်ေတာ်လွဲေနြပီလို့ ေြပာနိုင်ပါတယ်။ ဒီေတာ့ လံုးြကီးတင်ြပီးေမှ ေချာင်းငင်လာမလား၊ ေချာင်းငင်ြပီးမှ လံာုးကီးတင် လာမလား၊ ဆံုးြဖတ်ပါ။
ဒီေတာ့ လံုးြကီးတင်ြပီးေမှ ေချာင်းငင်လာမလား၊ ေချာင်းငင်ြပီးမှ လံာုးကီးတင် လာမလား၊ ဆံုးြဖတ်ပါ။
ယူဇာေတွကို ဟိုလိုရိုက်ပါ။ ဒီလိုရိုက်ပါ ေြပာေနမယ့်အစား ပရိုဂရမ်မာေတွက အဲလိုမြဖစ်ေအာင် မလုပ်ဘူးလား။
၁၈။ Softing - ရသည်ေြပာေသာ်လည်း တကယ်စမ်းမြပနိုင်ြခင်း
Lionslayer ##Sorting ကို Open Office မှာ (အခု) အလွယ်တကူ စမ်းနိုင်ပါတယ်။ ေနာက်ပိုင်း ဘယ် OS Vendor မဆို ြမန်မာစာ အတွက် အေထာက်အပံ့ေပးတဲ့အခါ ယူနီကုဒ်စံကိုသာ လိုက်နာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
Open Office ဟာ သာမန် word ပရိုဂရမ်ေတွထပ် များစွာ မန်မိုရီ ပိုကုန်တာကို စမ်းဘူးသူတိုင်းသိပါတယ်။ ေလာေလာဆယ်ေတာင် ေြပဿနာ ရှိေနတာ ဖတ်ဘူးပါတယ်။ Softing ဆိုတာကို လက်ရှိမှာလဲ သံုးမရ။ ဘယ် OS Vendor support မလုပ်ေသးပါဘူး။ ေနာက်ပိုင်းလဲ .... စဉ်းစားစရာရှိတာက အဲလို မန်မိုရီသံုးတဲ့ ေဖာင့်ေတွကို OS Vendor support လုပ်မယ်ဆိုရင်ေတာ့ ဝမ်းသာစရာေပါ့။ အနာဂတ်မှာရဖို့ ေလာေလာဆယ်မှာ သံုးချင်တဲ့ ပရိုဂရမ်မှာ သံုးလို့မရဘဲ ေစာင့်ေနရမယ့်ကိန်းပါ။
မွန်စာမှာ ဩ ဆိုတာ သတ်သတ်မရှိပါဘူး။ ဩ ဆိုတာ သ နဲ့ ြ-- ြဖစ်ြပီး သထဲမှာဘဲ စီတာ သိမ်းတာ ရှိပါတယ်။ အဲ့တာကို Open Office မှာ ရတယ်ဆိုတာကိုက လိမ်ညာေနတာလား။ တကယ်ဘဲမသိတာလား စဉ်းစားစရာပါ။
၁၉။ တီထွင်သူများ - user များ နားမလည်နိုင်ေသာ စကားများကို တွင်တွင်ေြပာြခင်း
Lionslayer ##နားရှုပ်စရာေတွ ရှိပါတယ်။ ကွှန်ေတာ်လည်း စသံုးခါစက သိပ်နားမလည်ပါဘူး။ ေနာက်ပိုင်းေတာ့ သူများကို ရှင်းြပဖို့ြကိုးစားရင်း ေတာ်ေတာ်များများ နားလည် လာပါြပီ။
၂၀။ အေနအထား - zawgyi လို ေရာ့သံုးလို့ရြပီလို့ မေြပာရဲြကြခင်း
Lionslayer ####မေြပာရဲစရာ ဘာမှ မရှိပါ။ သံုးမယ်ဆို သံုးလို့ ရပါြပီ။ ကျွန်ေတာ်ကိုယ်တိုင် သံုးလာတာ တစ်နှစ်ေကျာ်ပါြပီ။ ြပဿနာေတွ ရှိေကာင်းရှိမယ်။ အြပစ်ထိုင်တင်ေနမယ့်အစား ကွန်ပျူတာသံုး ြမန်မာစာ တိုးတက်လာဖို့အတွက် ယူနီကုဒ်အတွက် မိမိကိုယ်ပိုင်အချိန်ေတွထဲက ဖဲ့ြပီး အလုပ်လုပ်ေပးေနတဲ့ Developers ေတွကို ေလးစားေသာ အားြဖင့် မိမိြကံုေတွ့ေနရတဲ့ အခက်အခဲေတွကို သူတို့ကို Feedback ေပးြခင်းနဲ့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာသံုး ြမန်မာစာ တိုးတက်လာဖို့အတွက် တြခားနည်းေတွနဲ့ လုပ်လို့ ရတာေတွရှိပါတယ်။ ယူနီကုဒ်ေပါ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကွန်ပျူတာသံုးေဝါဟာရ ြမန်မာ ေဒရှင်နရီမျိုး အရင်လုပ်ရင်ကို ြဖစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်သံုးြပီး youtube-> သင့်ြပွန်၊ Motherborad -> အေမြပားလုပ်ေနလို့ကေတာ့ တိုးတက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ြမန်မာစာမှာ စံ ဆိုတာရှိြပီးသား၊ ြမန်မာစာ ကို ြမန်မာတိုင်း လက်ခံြပီးသားပါ။ ယူနီကုဒ်ြဖစ်ေအာင် ကွန်ပျူတာေနာက်ကို ြမန်မာစာစံက ေြပာင်းလိုက်ရမယ်ဆိုတာ မြဖစ်သင့်ပါဘူး။
ပညာရှင်ေတွအေနနဲ့ ငါတို့ ဘာလိုအပ်ေနလဲဆိုတာ ငါတို့က ပညာရှင်ပဲဆိုတဲ့ စိတ်မထားဘဲနဲ့ ယူဇာေတွ တကယ်တမ်းသံုးေတာ့ ဘယ်လိုမျိုး အခက်အခဲေတွြကံုေနသလဲ၊ ဘယ်လိုအသံေတွ ထွက်လာသလဲ ဆိုတာေတွေပါ်မှာ မူတည်ြပီး ြပန်ြပီးစမ်းစစ် ြပုြပင်သင့်တယ်။ ြမန်မာလူမျိုးေတွရဲ့(ြမန်မာဆိုတာ တိုင်းရင်းသားအားလံုးပါတယ်) ယူနီကုတ်စံရှိတဲ့ ေဖာင့်တစ်ခု ေပါ်ေပါက်လာမယ်ဆိုရင် အင်မတန် ဝမ်းသာဖို့ ေကာင်းလှပါတယ်။ ဒီလိုေဖာင့်မျိုးကိုလည်း တကယ်လက်ခံ ကျင့်သံုးရပါလိမ့်မယ်။ Standard တကယ်ရှိြပီ ဆိုရင် အားလံုး လက်ခံ ကျင့်သံုးမယ့် သူေတွြကီးပါပဲ။
ဒီလိုမျိုး ငါတို့ကို ေြပာေနတယ်ဆိုြပီး ြပန်ြပန်ေဆာ် ြပန်ြပန်ြပီးဒီလိုကစ်လိုက်ရမှ ဆိုတဲ့ စိတ်ထားမျိုး သေဘာထားေတွ မထားရင် ေကာင်းပါမယ်။
ပညာရှင် အချင်းချင်းပဲ သိမယ့်ကိစ္စေတွကို ပညာရှင်ေတွပဲ ေြပာြကပါ။ ကျွန်ေတာ်တို့လို လူြပိန်း (ဝါ) ယူဇာ များကို အမိန့်ေပးသလိုမျိုး ဟိုဟာသံုးခိုင်း ဒီဟာသံုးခိုင်း လာမလုပ်ပါနဲ့။ ေသချာနားလည်ေအာင် ရှင်းြပေပးတာေတွဟာ ပိုြပီး ေကာင်းပါမယ်။ ယူဇာေတွအေနနဲ့ အခက်အခဲေတွကို ေြပာေနတာေတွကိုလည်း မင်းတို့ ဘယ်ေလာက်သိသလဲဆိုတဲ့ ပံုစံမျိုးနဲ့ မသိနားမလည်တဲ့ စကားလံုးထုတ်ြပီး မပစ်ပါနဲ့။
ယူဇာေတွ (ကျွန်ေတာ်တို့ေတွဟာ) ြမန်မာစာ ဖျက်မယ့် လူေတွ မဟုတ်ြကပါဘူး။
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Friday, January 14, 2011
ဘာေျပာရမွန္း မသိလို႕ ဘာမွ မေျပာေတာ့ဘူး ကိုလင္းဦးေရ... တက္လာသမွ်ပဲ လိုက္ဖတ္ေနေတာ့တယ္.. ကိုယ္ေမးမယ္.. ေဟးေရေရး ေန႕တိုင္းအတြက္ ေဟးေရးေရး ဘာေတြျဖစ္ဦးမလဲ... ဒန္တန္႕တန္..
January 14, 2011 at 7:37:00 PM GMT+6:30
ယူ​နီ​ကု​ဒ​့္ သုံး​မှ မြန်မာ​စာ​က Standard ဖြစ်​တာ မဟုတ်​ပါ​ဘူး။ မြန်မာ​စာ​မှာ မြန်မာ​စာ​ရဲ့ အရည်အသွေး၊ သတ်​မှတ်ချက် စ​တဲ့ စံ​တွေ ရှိ​တဲ့ မြန်မာ​စာ​ပါ။ ကွန်ပျူတာ​သုံး​ဖို့ မြန်မာ​စာ​စံ​တွေ​ကို ဖောက်​ဖျတ်​ပြီး​လုပ်​ရ​မယ်​ဆို​ရင်​တော့ သ​ဘာ​ဝ​မ​ကျ​ဘူး​ထင်​ပါ​တယ်။ ယူ​နီ​ကုဒ်​ဖြစ်​အောင် ကွန်ပျူတာ​နောက်​ကို မြန်မာ​စာ​စံ​က ပြောင်း​လိုက်​ရ​မယ်​ဆို​တာ မ​ဖြစ်​သင့်​ပါ​ဘူး။
ကို​လင်း​ဦး နောက်ထပ် စာ​နည်း⁠နည်း​လောက် ဖတ်​ပြီး လေ့​လာ​ကြည့်​ပါ​ဦး။ ဘယ်​ဟာ​က မြန်မာ​စာ​စံ​ကို ဘယ်​လို​လိုက်နာ​ပြီး ဘယ်​ဟာ​က ဘယ်​လို​ဖောက်​ဖျက်​ထား​သလဲ နားလည်​သဘောပေါက်​သွား​အောင်။
January 14, 2011 at 9:50:00 PM GMT+6:30
January 15, 2011 at 5:25:00 AM GMT+6:30
January 15, 2011 at 5:27:00 AM GMT+6:30
January 15, 2011 at 5:30:00 AM GMT+6:30
ကိုလင်းဦး ယူနီကုဒ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားကို နားလည်မှုလွဲနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ယူနီကုဒ်မှာ မြန်မာစာပါလာအောင် စလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ မိုက်ကယ်အယ်ဗာဆင်ရော ကိုလင်းဦး ကိုးကားပြထားတဲ့ ကိုထူးမြင့်နောင်ပါ ငုတ်တုတ်ကြီးရှိပါသေးတယ်။ သူတို့နဲ့ တိုက်ရိုက်ပြောချင်သပဆိုရင် ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ Michael Everson, Htoo Myint Naung နာမည်တွေနဲ့ အလွယ်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကြောင့် မြန်မာစာအတွက် နေရာတစ်ခုရှိလာပြီး မြစေတီ၊ ဘစ်၊ ဇော်ဂျီ၊ ဧရာတွေ သုံးနေလာနိုင်တာ ကျေးဇူးရှိပါတယ်။
ဧရာဖောင့်တွေကို လုပ်နေတဲ့ ကိုမင်းကျော်နဲ့လည်း အွန်လိုင်းမှာ ကျွန်တော် ရင်းနှီးပါတယ်။ ဧရာ ယူနီကုဒ်ဖြစ်တာ မဖြစ်တာက တစ်ပိုင်းပါ။
ISO နဲ့ Unicode Consortium မှာ မြန်မာအက္ခရာတစ်လုံးပါအောင်လုပ်ရတာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲ လက်ဝင် အချိန်ကြာသလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကိုဇော်ထွဋ် ကိုငွေထွန်း ဆရာမကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်းတို့ကို မေးကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ အကိုးအကား အခိုင်အလုံ မပြနိုင်ရင် ဘာသာဗေဒ သဘောတရားအရ အဓိပ္ပါယ်မရှိရင် ဒါထည့်ပေးပါ ဒါပြောင်းပေးပါ သွားပြောလို့ မရပါ။ သဝေထိုးအနောက်မှာနေတာ Linguistic သဘောတရားအရပါ။ မြန်မာစာထက် အများကြီးရှေးကျတဲ့၊ မွန်စာ မြန်မာစာတို့ကတောင် ယူပြီးရေးရတဲ့ ဟိန္ဒူစာတွေလည်း ယူနီကုဒ်စံမှာ ဘာသာဗေဒကို လိုက်နာရတာပါပဲ။
ဒီထဲမှာ ပါတာတွေ တစ်ခုချင်း ပြန်ရှင်းနေရင် အချိန်လည်းကုန်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု ယူနီကုဒ်ကိစ္စ လုပ်နေတဲ့လူတွေပေါ် အမြင်မကြည်တာနဲ့ ယူနီကုဒ်မကောင်းဘူးဖြစ်တယ်ပြောတတ်လို့ အွန်လိုင်းမှာ တော်ရုံတန်ရုံ ပြောခဲပါတယ်။ရေငုံနေတာ များပါတယ်။
သုံးရတာ အဆင်မပြေရင် ဒါမမဟုတ် လိုချင်နေတဲ့ Feature တွေရှိရင် ယူနီကုတ်လုပ်နေတဲ့ Developers တွေဆီမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တောင်းဆို ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်စံတွေကို လိုက်နာနေတာ မြန်မာ၃ဖောင့် တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါ။ ပိတောက် ယွန်းချို စတဲ့ ဖောင့်တွေမှာ ဗမာ မွန် ရှမ်း ကရင် စတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် (လက်တွေ့) အစုံ သုံးလို့ ရနေပါပြီ။
နောက်တစ်ခု စလုံးကို ယပင့်လို့ ဈမျဉ်းဆွဲဖြစ်တာလား ဈ ရယ်လို့ အက္ခရာ သတ်သတ် ရှိတာလား၊ သကို ရရစ်လို့ ဩ ဖြစ်တာလား၊ အက္ခရာ ဩ ရယ်လို့ ရှိနေတာလား၊ ဘယ်ဟာက ဝေါဟာရလဲ၊ ဘာက ပေါရာဏလဲ စသည်ဖြင့် သေချာသိနေတယ်ဆိုရင် အထောက်အထား ရှာခဲ့ပါ။ ရှေးက ဘယ်ခုနှစ်က ဘယ်စာအုပ်မှာ ဘယ်သူက ဘယ်လိုရေးခဲ့တယ်ဆိုတာ အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံ ပြနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးပါ။ ကိုလင်းဦးဘက်က အထောက်အထား ခိုင်လုံတယ်ဆိုရင် ISO နဲ့ Unicode Consortium မှာ တင်ပြပြီး ကျွန်တော်တို့ Update ဖြစ်အောင် ပြောင်းပေးပါ့မယ်။
ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကို ယူဇာတွေ ဖတ်ချင်ဖတ် မဖတ်ချင်နေဆိုပြီး MyanmarLanguage.org မှာ ဆောင်းပါးလေး တစ်ပုဒ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကောက်ရေးပြီး တင်ထားလဲ ဖြစ်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အများက အမှားကိုအမှန်ထင်သွားမယ့် အချက်တွေကြောင့် ဖြေရှင်းရအောင် ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ရေးနေတယ်လို့ သိရင်ရပါပြီ။ ##Sorry for multiple duplicates of comment.
January 15, 2011 at 5:39:00 AM GMT+6:30
At present , we even cannot read all the post and comments in Myanmar . Very sad for being Myanmar asaMyanmar countryman
cannot read Myanmar Words created by Myanmar technicians.
Different people with different wisdom and pride not being able to unite for the good cause of national interests !!!!
January 16, 2011 at 7:35:00 PM GMT+6:30
ပ်ဴႏိုင္ငံ မွာ ယူနီကုတ္ကိစၥနဲ႔ ကြန္မန္႔ေပးတဲ့အထဲက လင့္ေပးထားလို႔ လာၾကည့္တာပါ။
အေပၚက တစ္မ်က္ႏွာလံုး အဂၤလိပ္တစ္မ်ိဳးပဲ ဖတ္လို႔ရတယ္၊
က်န္တာေတြ ခန္႔မွန္ဖတ္ရင္း ေခါင္းမူးလို႔ ျပန္ၿပီ၊ :-)
January 25, 2011 at 9:52:00 PM GMT+6:30